स्वास्थ्य – Kavreonline
जब तिर्खा लाग्छ, हामी हतारिएर बोतल वा ग्लासमा पानी हालेर घटाघट पिउन थाल्छौं । पानी विना मानिस बाच्न सक्दैन । स्वास्थ्य जीवनका लागि दैनिक ३ लिटर पानी पिउनुपर्छ । पानी पिउनाले मात्रै स्वस्थ भने भइदैन । पानी पिउने सहि तरीका अपनाउनु भएन भने…
गर्मी मौसममा आमाबाबुले बालबालिकालाई चिसो पेय पदार्थ दिने गर्छन् । यसले बालबालिकाको स्वास्थ्यमा धेरै असर गर्छ । कोक, फेन्टालगायतका पेय पदार्थले त असर गर्छ नै, बट्टामा राखिएका फलफूलको जुसले पनि धेरै असर गर्छ भनेर प्रमाणित भैसकेको छ ।…
त्रिफलाको ३ औषधिमध्ये एक अमला गुणी जडिबुटीमा पर्छ । अमला भिटामिनको राम्रो स्रोत भएकै कारण अमलालाई हिन्दु धर्ममा पनि पुजनीय फलको रुपमा राखिन्छ । भनिन्छ ३ वटा सुन्तलामा भन्दा १ वटा अमलामा धेरै भिटामिन हुन्छ र अमलाको रुखको फेदमा छायाँमा बसेर…
kavreonline	 Jun 13, 2019
सुन्दर देखिने चाहना सबैको हुन्छ। तर, सुन्दर र चम्किलो छाला भन्नेवित्तिकै कहाँ बनाउन सकिन्छ र। अझ अनुहारमा आउने अत्याधिक डन्डीफोरले त अनुहारलाई कुरुप नै बनाइदिन्छ। सुन्दर मुहारलाई कुरुप बनाउने डन्डिफोरलाई सामान्य घरेलु उपायले पनि हटाउन…
शरीरभित्र हुनसक्ने विभिन्न किसिमका रोग पत्ता लगाउन रगतको परीक्षण गराइन्छ । रगत परीक्षण गराउन अस्पताल जाँदा के गर्ने ? के खाने वा के नखाने भन्ने विषयमा जानकारी नहुँदा धेरै व्यक्तिहरु अस्पतालबाट फर्किनुभएको पनि होला । कतिपय रोग पत्ता लगाउन…
आखिर किन आउँछ नकारात्मक सोच, कसरी हटाउने? जानौ
नेपाली समाजमा नकारात्मक सोचले जरा गाडेको छ। फलानाले राम्रो लगायो, मिठो खायो भनेर अरुको रिस–डाह गर्ने, आफ्नै जीवनसँग गुनासो, असन्तुष्टि राख्नेहरुको संख्या बढ्दै गएको देखिन्छ। यस्ता असन्तुष्टिले जीवनमा उदासीपन एवं निराशा उत्पन्न हुन्छ र…
मुखमा घाउ आयो? के गर्ने? हेर्नुहोस
प्रश्न: मेरो मुखमा घाउ आएको करिब २ वर्ष हुन लाग्यो। कुखुराके मासु खाँदा घाउ एकदमै बढ्छ र मुखको वरिपरि रगत जम्छ। मैले काठमाडौंमा सिभिल अस्पतालमा देखाएको थिएँ र मुसा भएको शंका लागेर बायोप्सी पनि गराएको थिएँ। रिपोर्टबाट मुसा नभएको पुष्टि भयो।…
यति बेला नेपालमा मध्य गर्मी छ । गर्मीयाममा खानेकुरामा निकै सचेत हुनुपर्छ । विशेषगरी राति खाने खानामा बढी ध्यान दिनुपर्छ, ता कि निद्रा तथा पेटसम्बन्धी कुनै प्रकारको समस्या नआओस् । यस्ता खाद्यपदार्थको सेवनले शरीरमा शक्ति र तरलताको मात्रा…
पिनास भनेको साइनसहरुको इन्फ्लामेसन हो । साइनस भनेको टाउको र अनुहारका हाडहरुमा हुने हावा भरिएका खाली भागहरु हुन् जो स-साना प्वालहरु ओस्टियम को माध्यमबाट नाकको श्वासमार्गसँग जोडिएका हुन्छन्। किन हुन्छ पिनास ? पिनास हुने कारण भनेको…
विदेश जाने कामदारहरूलाइ खुसीकाे खवर अव स्वास्थ्य परीक्षणका लागि थप ५१ अस्पताल
Kavreonline– श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण गराउन थप ५१ वटा अस्पताललाई अनुमति दिएको छ । स्वास्थ्य परीक्षणका लागि सुचीकृत हुन निवेदन दिएका १ सय २६ वटा स्वास्थ्य संस्थामध्ये…